Actus Archives · déliremadagascar
Parsely 342 amin’ireo tany na tanimbary voakasikin’ny fanamboaran-dalana Rocade Iarivo no tsy mbola voaloa onitra. Nosokafana tamin’ny fomba
Be dia be ny olona sima molotra sy vakilanilany eto Madagasikara no mbola tsy nandalo fandidiana.
Tamin’ny roa taona lasa no nisy Grande Braderie de Madagascar farany.
Mitohy hatrany ny fametrahana sekoly nomerika eto Madagasikara miaraka amin’ny Orange, amin’ny alalan’ny orange solidarité de madagascar.
Construction d’un avenir meilleur. Dans le cadre de la célébration de l’« année européenne de la jeunesse 2022 »,
Socio-eco	 15 mai 2022 R Nirina
AMBATOVY : Nanolotra « Sulfate d’alumine » 10 taonina
Amin’ny maha orinasa mandray andraikitra sy mpikambana feno azy eo anivon’ny fiarahamonina dia mijoro hatrany ho mpiara-miasa stratejika amin’ireo tetikasa fampandrosoana hositrahin’ny vahoaka Malagasy Ambatovy. Continuer la lecture →
Lasa mamokatra ny tany karakaina. Noho ny fahitan’ny GIZ ny vokatra azo tamin’ny tetikasa fampidirana ny “agorécologie” any an-tsekoly tao Vakinankaratra, nataon’ny GSDM dia sekoly miankina amin’ny fanjakana sy tsy miankina miisa 12 ao amin’ny faritra Boeny ampianarana ity fomba fambolena maharitra ity. Continuer la lecture →
Socio-eco	 9 mai 2022 R Nirina
AGROÉCOLOGIE : Azo antoka amin’ny fiarovana ny tontolo iainana
Sady miaro ny tontolo iainana no betsaka ny vokatra. Fanotaniana mipetraka ny hoe ahoana ny atao amin’ity fiovan’ny toetry ny andro ity ? Ankoatra ny fambolen-kazo dia misy ny fomba fambolena miaro ny tontolo iainana. Continuer la lecture →